Imibuzo Emihlanu Yokuhlola Ukuhambelana Kwakho Kokuthengisa Nokukhangisa Martech Zone
NgoLwesine, ngoMashi 19, 2009 NgoMgqibelo, Okthoba 18, 2014 Douglas Karr
Lesi silinganiso sinamathele kimi evikini elidlule:
Inhloso yokumaketha ukwenza ukuthengisa kungadingeki. Inhloso yokumaketha ukwazi nokuqonda kahle ikhasimende ukuze umkhiqizo noma insiza ilingane naye futhi izithengise. UPeter Drucker
Njengoba izinsiza zincipha nomthwalo womsebenzi ukwanda kumaketha ojwayelekile, kunzima ukugcina umgomo wemizamo yakho yokumaketha ephezulu engqondweni. Nsuku zonke sibhekana nezinkinga zabasebenzi, ukuhlaselwa kwama-imeyili, isikhathi esinqunyiwe, isabelomali… bonke abaphikisana nalokhu okubalulekile ebhizinisini elinempilo.
Uma ufuna ukuthi imizamo yakho yokumaketha ikhokhele, kufanele uhlole uhlelo lwakho njalo futhi uhlale usezingeni lokuthi izinsiza zakho zisetshenziswa kanjani. Nayi imibuzo emi-5 ezokusiza ikuholele kuhlelo lokukhangisa olusebenza kahle kakhulu:
Ngabe abasebenzi ababhekene namakhasimende akho, noma abaphathi babo, uyazi ngomlayezo owukhulumayo ngohlelo lwakho lokumaketha? Kubalulekile, ikakhulukazi namakhasimende akho amasha, ukuthi abasebenzi bakho baqonde okulindelwe okusethwe kuyo yonke inqubo yokumaketha nokuthengisa. Ukweqa okulindelwe kwenza amaklayenti ajabule.
Ingabe uhlelo lwakho lokumaketha okwenza kube lula ukuthi abathengisi bakho bakwazi ukuthengisa umkhiqizo wakho noma insiza? Uma kungenjalo, kufanele uhlaziye izithiyo ezengeziwe zokuguqula iklayenti bese ufaka amasu okuzinqoba.
Ngabe uqobo, iqembu kanye nomnyango imigomo kuyo yonke inhlangano yakho iyahambisana nemizamo yakho yokumaketha noma ngokushayisana nabo? Isibonelo esivamile yinkampani ebeka imigomo yokukhiqiza yabasebenzi eyehlisa izinga lezinsizakalo zamakhasimende, ngaleyo ndlela inciphise imizamo yakho yokumaketha.
Ngabe uyakwazi ukulinganisa i- buyela ekutshalweni kwezimali ngecebo lakho ngalinye? Abathengisi abaningi bakhangwa yizinto ezicwebezelayo kunokulinganisa nokuqonda kahle ukuthi yini okusebenzayo. Sivame ukudonsela ekusebenzeni thina like ukwenza kunomsebenzi owethulwayo.
Ngabe wakhe i inqubo yemephu yamasu akho wokumaketha? Imephu yenqubo iqala ngokuhlukanisa amathemba akho ngosayizi, imboni noma umthombo ... bese kuchazwa izidingo nokuphikisana kwalowo nalowo… bese kuqaliswa isu elifanelekile elingalinganiselwa ukubuyisa imiphumela ezinhlosweni ezimbalwa ezimaphakathi.
Ukuhlinzeka ngaleli zinga lemininingwane kuhlelo lwakho lonke lokumaketha kuzovula amehlo akho ezingxabanweni nakumathuba ngaphakathi kwamasu wokumaketha wenkampani yakho. Kungumzamo okufanele uwenze ngokushesha kunokuba kamuva!
Tags: ukuqondanisaabasebenziukumaketha kwangaphakathiukuqondanisa kokumakethaukumaketha nokuthengisaukungqubuzana kwezokukhangisaukuqondanisa izinhloso zokumakethaizinjongo zokumakethamarketing isuukuqondanisa umlayezoUPeter Druckerpeter drucker quoteukuqondanisa kokuthengisaukuthengisa nokumakethaUkunika Amandla Ukuthengisaukuqondanisa kokuthengisa
Mar 20, 2009 ku-10: 31 AM
Ukukhuluma kwakho ulimi lwami. Angikaze ngiqonde ukuthi kungani abantu bengenayo inqubo futhi ngendlela ikhalenda elingeyona inqubo. Izinqubo zisebenza inqobo nje uma zibuyekezwa futhi zithuthukiswa njalo. Abantu badela kalula ekuzameni ukuthuthukisa eyodwa kanti amahloni akho konke lokho; Mingaki imibono emihle emoshayo ngenxa yenqubo embi?
Okuthunyelwe okuhle! Ikakhulukazi, lapho ucabanga njengami! :)
Mar 20, 2009 ku-11: 37 AM
Lokhu kuhamba kahle kunoma iyiphi inqubo yokumaketha. Njengamanje ngibheka amasu amasha wokumaketha enkampanini yami futhi anginasizinda sangempela sokumaketha. Le bhulogi iyithuluzi elihle kimi.
Mar 23, 2009 ku-10: 05 PM
Inombolo yesibili ibalulekile ekuhlangabezaneni nezinhloso zokuthengisa. Ngibonile izindawo lapho bebiza khona ukumaketha, iqembu lokuvimbela ukuthengisa!
Ukucaphuna kukaMnu Drucker, ngenhlonipho, kuyindida ethile. Uma kufanele ukuxoxa kube:
Ngakho-ke inhloso yokuthengisa kungaba ukwenza ukumaketha kungadingeki? Inhloso yokuthengisa ukuxhumana nekhasimende kahle kangangokuba umkhiqizo noma insizakalo ayidingi ukuthi imakethwe?
- Akekho umphumela